Rosia : Fihetsiketsehana Tamin’ny 10 Desambra tao Vladivostok · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Celine Lenoble
Voadika ny 22 Desambra 2011 20:54 GMT
Mbola mahabe adihevitra hatrany ao Rosia ny fifidianana solombavambahoaka vao haingana sy ny vokam-pifidianana izay fantatra fa nisy hosoka. Na dia teo aza ny filazana ireo hosoka sy hala-bato niseho nandritra ny fifidianana , dia afaka naneho ny heviny ny olom-pirenena Rosiana.
Tamin'ireo Birao fandatsaham-bato 4 amin'ireo 5 ao Vladivostok, tanàna rosiana farany atsinanana indrindra, resin'ny Antoko Komonista ny antokon'ny fitondrana ao Rosia Mitambatra, toerana nahazoany vato ambany indrindra tao amin'ny firenena.
Nialoha ny nisian'ny fihetsiketsehana tao an-toerana ny 10 desambra tao an-tanàna maro tao Rosia, nafana ny ady hevitra mikasika ny tokony hanaovan'ny fivondronan'ny mpiserasera ao Vladivostoka fihetsiketsehana . Tsy miantso ho amin'ny revolisiona na fiovana maherisetra ny fitondrana kosa ny mpiserasera ; fa mifanohitra amin'izany, miantso amin'ny fihetsiketsehana milamina ny vahoaka, tsy misy herisetra. AlleyCat nanoratra fa tsy misy dikany ny antso ho amin'ny revolisiona raha toa ka tsy misy tetikasa mazava sy mipetraka amin'izay mety hitranga any aoriana.
Nanohana ny mpanao fihetsiketsehana tao Mosko ireo bilaogera ao Vladivostok, na dia monina 10 000 km miala eo aza izy ireo. Sary: Don Sera (domaine public)
Talohan'ny andron'ny fihetsiketsehana 10 desambra, nampahafantatra ny bilaogera fa tonga avy any Moskoa ny polisy misahana ny rotaka mba “hanaparitaka ny mpanao fihetsiketsehana”. Tsy vao voalohany no nandefa polisy misahana ny rotaka avy ao Moskoa i Kremlin mba hampiato ny fihetsiketsehana ao Vladivostok, izay mampibaribary ny olana miseho somary manahirana be ihany nialoha ny fihetsiketsehana.
Tsikaritra fa tsy nahitana herisetra mihitsy ny fihetsiketsehana fa firahalahiana toy ny tany amin'ny faritra hafa maro tao amin'ny firenena, tsy nisy na dia herisetra avy amin'ny polisy aza. Loharanom-baovao samihafa no nanambara fa mpanao fihetsiketsehana 500 hatramin'ny 1000 no tao – solontenan'ny antoko Komonista ny ankamaroany, hetsika TIGR sy mpamaha bolongana ao an-toerana – nandritra ny diaben'ny fanoherana. Azonao jerena eto sy ato ny sary.
anbavl mizara lahatsarin'ny fihetsiketsehana :
Mpamaha bolongana Followme nanamarika fa na dia tsy nahitana vahoaka be aza, efa isa mahatalanjona olona an'arivony ho an'i Vladivostok, tanàna ahitana mponina eo amin'ny 610 000 eo.
Don Sera tao amin'ny LiveJournal nanamarika fa tsy nisy hala-bato betsaka tamin'ny fifidianana tao Vladivostok, izany indrindra no antony nahatonga ireo “mpanao fihetsiketsehana ao Vladisvostok hidina an-dalambe mba hitolona miaraka amin'ireo mpitolona ho amin'ny fanafahana ny olom-pirenena sy ho amin'ny fifidianana madio”, tahaka an'i Alexey Navalny sy Ilya Yashin, izay any am-ponja ankehitriny.
Tsy naherisetra ny polisy, ary tsy nisy olona nosamborina. Don Sera nanoratra fa noho ny fomba amam-panao tsara ao an-tanàna izany izay ahitana fa na ny manam-pahefana koa aza mitondra fiara misy familiana an-kavanana- ohatra tsara ao Vladivostok. [Naotin'ny mpandika: Ao Vladivosktok, fiara marobe no nafarana avy any Japana eo akaiky eo, ary an-kavanana avokoa no misy ny familiana].
Zeka Vasch, mpamaha bolongana malaza ao Vladivostok, nihevitra fa ny solotenan'ny fikambanan'ny sehatra bilaogy LiveJournal ao an-toerana ary ny Twitter dia nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana, indrindra indrindra fa tsy mba navoakan'ny fampahalalam-baovao lehibe ny fihetsiketsehana nokasaina natao. Tahaka ny ao amin'ny tanàna hafa ao Rosia, namela ny tontolo virtoalin'ny olom-pirenena mpiserasera mba handray anjara amin'ny hetsika amin'ny tontolo tena izany.